त्रिविका गोल्ड मेडलिस्ट भन्छन्- 'परीक्षामा नआत्तिनू' - Gulminews
त्रिविका गोल्ड मेडलिस्ट भन्छन्- ‘परीक्षामा नआत्तिनू’
२०७६ पुष ४, ०३:२०
काठमाडौँ, पुस ४ । गुल्मी स्थायी घर भएकी मीरा ज्ञवाली सानैदेखि अब्बल विद्यार्थी रहँदै आएकी छिन् । उनी अहिलेसम्म दोस्रो हुनु परेको रेकर्ड छैन । बिहीबार त्रिविको ४५ औँ दिक्षान्त समारोहमा हजारौँको उपस्थिति थियो । हजारौँको भीडमा एमबीए तहमा अध्ययरत विद्यार्थीमध्ये सर्वोत्कृष्ट घोषित भएर गलामा गोल्ड मेडल पहिरिँदाको क्षण उनका लागि सुनौलो अर्थात् गोल्डेन बन्न पुग्यो ।
सीपीजीए ३.८६ ल्याएर ‘श्री इन्द्र भक्त श्रेष्ठ’ स्वर्ण पदक प्राप्त गरेकी उनी प्रमाणपत्र र गोल्ड मेडल लिएर स्टेजबाट झर्दै गर्दा उनमा खुसी, हर्ष, उत्साहको झल्को प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो। गुल्मीको महेन्द्र माविबाट २०६३ सालमा एसएलसी दिएकी उनी गुल्मी जिल्लाको महिलातर्फ सर्वोत्कृष्ट भएकी थिइन्।
२८ वर्षीया मीरा स्नातकको पनि गोल्ड मेडलिस्ट हुन्। पढाइमा अब्बल भएकै कारण उनले हरेक समेस्टर छात्रवृत्तिमा नै पढेकी हुन्। मीरा भन्छिन्, ‘पढाइमा मेरा दुई भाइ पनि निकै अगाडि छन्। उनीहरुले पनि छात्रवृत्तिमा नै पढेका हुन्। एक भाइ डाक्टर छ अर्को इन्जिनियर।’
मीरा हाल २ वर्षदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक पुल्चोक शाखामा सहायक बैँक म्यानेजरको रुपमा कार्यरत रहेकी छिन्। उनको नाम लोकसेवा नतिजाको लिस्टमा पनि सबभन्दा माथि पहिलो प्रयासमा नै आएको थियो।
छात्रवृत्तिमै पढेपछि त बाआमाको लगानी बचाउनुभयो है? भन्ने प्रश्नमा मीरा हाँस्दै भन्छिन्,‘ हामी नै हो त हो बाआमाको सम्पत्ति। हाम्रो सफलता देखि उहाँहरु निकै खुसी हुनुहुन्छ।’दीक्षान्तमा उनको श्रीमान् पनि साथै आएका थिए। मीराका श्रीमान् विदुष नेपाल भन्छन्, ‘सँगै पढेका हौँ, उनको उद्देश्य त पीएचडी नै गर्ने छ। र, म उनीसँगै छु।’ सधैँ पहिलो हुन के गर्नुपर्छ त? यस विषयमा मीरा भन्छिन्,‘आफ्नो पढाइमा सय प्रतिशतदिने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसपछि सफल त भइहालिन्छ नि ! ’
छेउमै देखिइन गोल्ड मेडल भिरेकी झापाकी प्रनिता पौड्याल । उनी अभिभावकसँग फोटो खिच्नमा व्यस्त थिइन् ।उनले एमएस्सी जैविक प्रविधि विषयमा सर्वप्रथम भएर ‘डा रेखा र लक्षमैयाँ श्रीरामा स्वर्ण पदक’ प्राप्त गरेकी हुन्। प्रनिताले कुनै समयमा भविष्यमा डाक्टर बन्ने सपना देखेको थिइन्। तर, रगत देखेर उनी डराउथिन त्यसैले त्यसमा रुचि गएन। अनि जैविक प्रविधि विषय रोजिन्। अहिलेसम्म विद्यालय तहदेखि नै प्रथम विद्यार्थीको रुपमा रहँदै आएकी उनले स्नातक पोखराको युनिभर्सल साइन्स कलेजबाट उत्तीर्ण गरेकी हुन्। उनी स्नातकको पनि गोल्ड मेडलिस्ट हुन्।
स्नातक रसायनशास्त्रमा गरिन् तर स्नात्तकोत्तरमा जैविक प्रविधि विषय रोजे पनि सर्वोत्कृष्ट बन्न पुगेकी हुन्। प्रनिता भन्छिन्, ‘फरक विषय थियो मेरालागि र नौलोपनि तर मैले मेहनत साथ पढेँ र गरेर देखाएँ। यो एकैदिनको मिहिनेत त होइन वर्षोँको मिहिनेतको फल हो।’
प्रनिताका लागि सर्वोत्कृष्ट हुनु पक्कै पनि सजिलो थिएन। प्रतिस्पर्धा कडा थियो। हाल नेपाल एकाडेमी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी(नास्ट)मा अस्सिटेन्ट रिसर्च फेलोको रुपमा कार्यरत रहेकी प्रनिताले विद्यार्थीहरु सधैँ आफ्नो रुटिन कडा रुपमा फलो गर्नुपर्ने सुझाउँछिन्। उनी भन्छिन्,‘ दिइएको गृहकार्य भोलि गर्छु भन्दै ‘डेडलाइन’ क्रस गर्ने विद्यार्थीहरुको बानी राम्रो होइन। आफूले गर्छु भनेको काम समयमै पूरा गर्नुपर्छ।’
प्रनिताको विचारमा डिग्री जहाँबाट लिएपनि आफ्नो भूमिलाई बिर्सन हुँदैन। कहिलेकाहीँ आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसरको कमी सिर्जना नभएको देख्दा दिक्क लागेपनि देशलाई माया मार्न नहुने उनको बुझाइ छ।
पीएचडी गर्ने लक्ष्य बनाएकी प्रनिताले अध्ययनको लागि बाहिर गएपनि फर्केर आफ्नै देशमा आएर सेवा गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
सरले पढाएको राम्ररी ध्यान दिएर सुन्ने, घोकेर भन्दा बुझेर पढ्ने र रुटिन बनाएर पढ्ने बानीको विकास गरियो भने पढाइमा सफल भइन्छ भन्ने प्रनिताको अनुभवले बताउँछ। परीक्षा नजिकिँदै गर्दा आफू भूमिगत गएर परीक्षाको तयारी गर्ने उनी बताउँछिन्।
छेवैमा थिइन् प्रनिताका आमा। भन्छिन् ‘आफ्ना बालबच्चाले प्रगति गरेको देख्दा कुन बा आमाको मन खुसी नहोला र? निकै खुसी छु।’
त्यसैगरी मास्टर्स इन बिजनेस स्टडिजमा सर्वोत्कृष्ट भएर ‘ने.बैँ.लि.सरदार गुञ्जमान सिंह स्वर्ण पदक’ प्राप्त गरेका गोरखाका विकल देवकोटाले आफूले क्लास कहिले मिस नगर्ने र पढाइमा ध्यान दिने भएकाले उत्कृष्ट बन्न पुगेको बताउँछन्। विद्यार्थीहरुले पढाइलाई कहिले बोझको रुपमा लिन नहुने र परीक्षा आउँदा आत्तिन नहुने उनको सुझाव छ।
‘म ठीकठीकैको विद्यार्थी हुँ तर मिहिनेती विद्यार्थी हुँ। दिनको ३ देखि ४ घण्टा मज्जाले पढ्थेँ। हर्षित मुद्रामा विकल भन्छन्, ‘मेडल नै पाउँछु भन्ने त विश्वास नै थिएन।’
आज ४५ औँ दीक्षान्तमा २०७५ असार १ गतेदेखि २०७६ जेठ ३१ गतेसम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिएका ७० हजार ७७ जना विद्यार्थीहरु दीक्षित भए जसमा समारोहमा १० हजार १८३ जना विद्यार्थीहरुको सहभागिता थियो। जसमा ३१ विधामा सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई गोल्ड मेडल दिइएको थियो । -ईकान्तिपुर डट कमबाट सभार